Fanomezam-boninahitra: tsy voahaja ny fisaonana ho an’i Régis Gizavo… | NewsMada
Fanomezam-boninahitra: tsy voahaja ny fisaonana ho an’i Régis Gizavo…
Mitohy ny tandrametaka sy ny kitoatoan’ny fitondrana. Maro ireo birao na tranom-panjakana ahitana ny sainam-pirenena, tsy nanaraka ny fisaonam-pirenena nambaran’ny fanjakana fa tokony hatao, omaly noho ny fahalasanan’ilay mpanakanto andrarezina, Régis Gizavo. Anisan’ny tsy nampidina ny saina teo amin’ny antsasany ny etsy amin’ny tobin’ny zandary Ankadilalana, ny minisiteran’ny Varotra, ny minisitera sasany etsy Anosy. Tahaka izany koa ny toeram-pianarana ambony Inscae sy ny Havana 67 ha. Hatreny amin’ny hopitaly manara-penitra… Tsy vitan’izany fa hatrany amin’ny haino aman-jery aza, vitsy ireo mba nanaraka izany ka nandefa hira milamindamina na koa nandefa tsy an-kiato ny hiran’ity mpanakanto ity. Ho an’ny olom-pirenena tsotra indray, maro ireo tsy mahalala izany akory. Na ireo lanonana samihafa aza, tokony ho foana avokoa raha tena fisaonam-pirenena. Midika ireo fa eo aloha ilay seraseran’ny fitondrana sy ny fampahafantarana na koa fanentanana tsy mahomby na tsy ampy.
Efa maty hatrany vao Ramalala
Eo mihitsy koa ny tsy fahaizana ka tsy mahagaga raha tsy hita taratra akory ny fiaraha-miory. Tokony ho hita ety ivelany anefa izany ary arahina fisaonana nefa toa nohadinoina na nanaovana fanahy iniana ? Tokony ho hita maso ary ao am-po izany fisaonana izany…
Mazava koa ilay fanapahan-kevitra petatokon’ny fitondrana fa natao hanaronana ilay tsy firaharahana ny mpanakanto fony fahavelony ny nandraisana ilay fepetra ho fisaonam-pirenena. Tsy mba anisan’ireo nahazo mari-pankasitrahana na mari-boninahitra i Régis Gizavo. “Rehefa maty vao mihazakazaka foana manome voninahitra na koa fisaonam-pirenena. Tsy aleo ve hatolotra azy dieny mbola velona izany haja sy voninahitra mendrika azy izany. Izao lasa fihatsarambelatsihy fotsiny ?”, hoy ny depiote Randrianarisoa Guy Rivo.